Gabi ahaan Awe.sm Falanqaynta Baraha Bulshada | Martech Zone
Talaado, Juun 19, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Marka ay timaado suuqgeynta warbaahinta bulshada, Analytics waa badelaha ciyaarta. Iyadoo aan Analytics waxay noqoneysaa mid aan macquul aheyn in la go'aamiyo ololeyaasha guuleysta, halka loo jiheysto dakhliga xayeysiinta, iyo waxa ku xira macaamiisha. Si kastaba ha noqotee Analytics aawadood Analytics wax faa iido ah maleh. Kaliya kuwa sharraxaya sida faragelinta warbaahinta bulshada ay u kordhiso qiime ama ay u keento beddelaad arrin.
Awe.sm waxay qaaddaa suuq geyn waxqabadka warbaahinta bulshada. Waxay kobcisaa warbaahinta bulshada Analytics oo leh "aragtiyo waxqabad leh," oo u oggolaanaysa ganacsiyada iyo suuqleyda inay helaan jawaab cad oo cabbira su'aalaha sida haddii olole baraha bulshada laga sameeyay ay qasab tahay in la galiyo websaydhka, imisa nooc oo nooc ah ayaa la beddelay, qiimaha beddelaaddaas, iyo in ka badan.
awe.sm waa barmaamijka hormuudka u ah shirkadaha si looga faa'iideysto xogta bulshada. Waxaan cabbireynaa sida suuqgeynta bulshada sida qoraallada Facebook iyo cusbooneysiinta Twitter ay u horseedeyso natiijooyin macno leh, sida saxiixyada, iibsashada, iyo yoolalka kale ee ganacsiga
Waa kan wareysiga Scobleizer oo muujinaya Awe.sm iyo VIPLi.st, oo ah codsi shaqo oo muujinaya awoodaha Awe.sm:
Awe.sm waxay bixisaa aalad daabacaad, ama waxaad ku dhex dari kartaa shaqooyinka jira. Waxay la socotaa qoraal kasta oo warbaahinta bulshada ah shaqsi ahaan waxayna siisaa macluumaad faahfaahsan sida kanaalka, waqtiga maalinta, fariimaha, waxyaabaha iyo waxyaabo kale oo dheeri ah. Waxay la midowdaa Google Analytics waxayna bixisaa Soo-celinta maalgashiga warbaahinta bulshada marka loo eego kanaallada kale ee suuqgeynta.
Qiyaasta heerarka shaqsi ee Awe.sm waxay u oggolaaneysaa isbarbardhigyo fudud si loo ogaado isku-darka riixa. Tusaale ahaan, dadku waxay iska diiwaan gelin karaan dhacdo la soo dhejiyay. Awe.sm ayaa hoos u qodaya isla markaana ka ogaanaya barta uu ku soo qoro ama dib ugu soo qoro, ama Facebook ku dhajiyo ama la wadaago ma dadka is qoray, ayaa ka yimid. Iyo, warbixinnadu waxay ka gudbaan oo keliya duubista waxyaabaha ama saamiyada, waxayna bixiyaan cabbiraadaha ama qiimaha lacageed.
Awe.sm wuxuu bixiyaa seddex qorshe oo kala duwan: qorshe shaqsiyeed hal mashruuc, qorshe pro ah oo u ogolaanaya maamulida toban mashruuc oo kala duwan isla mar ahaantaana iyo qorshaha ganacsi ee u ogolaanaya maaraynta tiro aan xadidneyn oo mashaariic isku mar ah. Qorshaha shirkadu wuxuu bixiyaa ikhtiyaar si buuxda u calaamadeysan waxqabadka warbaahinta bulshada oo ay kujirto adeegyo qiimo leh sida URL-yada caadooyinka ah, warbixinnada qaabeynta qaabeynta, awooda isku-darka xogta awe.sm warbixinnada gudaha iyo wixii intaa ka badan.
Tags: falanqaynta apiAPIcabsi.smRobert scoblefalanqaynta warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada apivipli.st
4 Furayaal Olole Guul Guul ah
Jun 20, 2012 saacadu markay ahayd 5:35 AM
Falanqaynta suuqgeynta warbaahinta bulshada waa hab fiican oo lagu soo bandhigo sida kanaallada bulshada ay door muhiim ah uga ciyaaraan raadinta bartaada…